फार्मेसी सञ्चालक भन्छन्– जोखिम मोलेर सेवा दिन सकिदैंन, खोई पीपीई ? : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks फार्मेसी सञ्चालक भन्छन्– जोखिम मोलेर सेवा दिन सकिदैंन, खोई पीपीई ?
काठमाडौं । तपाईलाई एक्कासी टाउको दुख्यो र, क्लिनिक वा कुनै अस्पताल जानु प-यो अथवा तपाईसँग चिकित्सकको प्रेष्कृप्सन छ, औषधि किन्न फार्मेसी जानुपर्ने भयो ? विडम्वना अहिले घर बाहिर निस्कन पनि डर छ, यदि निस्किहाल्नुभयो भने न त नजिकै अस्पताल वा क्लिनिकमा स्वास्थ्यकर्मी भेट्नुहुन्छ न त सहज तरिकाले फार्मेसीहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।
फार्मेसी सञ्चालकहरुको जवाफ छ, सामाजिक दुरी कायम गर्न प-यो, ‘३ फिट दुरी कायम गर्न भनेको छ । के गर्नु व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) पनि छैन, यसरी जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्न सकिन्न ।’
एक हप्तादेखि नेपाली बजारमा औषधि आयात भएको छैनः आयातकर्ता संघ
बेलुकीको समयमा ढुवानी सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्छौ : औषधि उत्पादक संघ
औषधिनै नपाइने स्थिति सिर्जना भए वैकल्पिक उपाय सोच्छौंः औषधि व्यवस्था विभाग
सरकारले भने औषधि पसल र अस्पतालहरु अत्यावश्यकीय भएको भन्दै निर्वाद रुपमा सञ्चालन गर्न भन्दै आएको छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा पीपीई उपलब्ध नगराउँदा आफूहरुले जोखिम मोल्न नसकेको निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु बताउँछन् । कीर्तिपुर फार्मेसीका जीवन महर्जनले भने, ‘पसल त खोल्छु तर, न मसँग पीपीर्ई छ, न त यहाँ काम गर्ने फर्मासिष्टसँग नै ?’
औषधि अभाव भएकै हो त ?
औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्य भन्छन्, ‘एक हप्तादेखि औषधि आयात हुनसकेको छैन । गोदाममा त छन् औषधिहरु तर, विरामीहरुले अतिरिक्त रुपमा भण्डारण गर्दै आएका छन् ।’ औषधिको अभाब होला त ? आचार्य थप्छन, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरु बन्द रहिरहे जिल्लामा औषधि अभाव खड्किने निश्चित छ । लोकल ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुले इम्पोर्टरहरुको गोदाममा रहेका औषधिहरु उठाइरहेका छैनन् ।’
उनले औषधि व्यवसायीहरुमाथि राज्यले अपमानजनक व्यवहार गरेको गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘औषधि व्यावसायिहरुले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । प्रहरीले पास खोज्छ, दुःख दिन्छ ।’ मास्कको भरमा जोखिम लिएर औषधि व्यावसायिहरुले काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । २१ दिने लकडाउन गरेसँगै भारतबाट आयात हुने औषधिहरु प्रायः ठप्प छन् ।
औषधि उत्पादन रोकिदैंन
औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारी भन्छन्, ‘औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु चीनवाट ल्याउन पहल थालिएको छ । संघाईमा कच्चा पदार्थ संकलन गर्ने र एयर लिफ्टबाट भए पनि ल्याउने गरी हामी लागिरहेका छौं ।’ उनले उद्योग सञ्चालन दिउँसो गर्नुपर्ने भएकाले बेलुकीको समयमा ढुवानीको सहज गर्न सरकारलाई अपिल गरे । उनले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्ने भनिएको छ, त्यसैले व्यवस्थित गरेर आम उपभोक्तालाई पुग्ने औषधि उत्पादनमा हामी तल्लिन छौं ।’
फार्मेसी पनि बन्द ?
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन, ‘विहान अथवा बेलुकी सामाजिक दुरी कायम गरेर बिक्री गर्न व्यावसायिहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । अप्ठेरो स्थिति आए बैकल्पिक उपाय सोंच्छौं ।’ उनले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरु भने बन्द नरहेको बताए ।
बागलुङ । भुकम्पको धक्काले बागलुङमा एक घर भत्किएको छ । बुधबार बिहानपख गएको भुकम्पको धक्काले बागलुङ नगरपालिका–६ का ६९ बर्षिय दुर्गाबहादुर सुवेदीको घर भत्किएको...
भर्खरै Kumar Raut - July 6, 2020 0
अहिले सिङ्गो विश्व कोरोनाविरुद्धको लडाइमा केन्द्रित छ । नेपाल पनि विगत ३१ औं दिनदेखि लकडाउनमा छ । सरकारले सबै नागरिकलाई घरभित्रै बस्न र अत्यावश्यक...
प्रदेश ५ Dhruba Lamsal - March 31, 2020 0
Editor-Picks महेश्वर गौतम - June 4, 2021 0
काठमाडौं । तोकिएको समय महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा...